မော်နီကာဆန် | | ခရီးသွားနေရာများ, အာရှခရီးသွားခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသောနေရာတစ်ခုသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏အဆောက်အအုံများ၊ အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုသဘောကျနှစ်သက်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မေလူစုသည်အထင်ရှားဆုံးမှာညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည် ဒီမြို့မှာပစ္စုပ္ပန်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အညစ်ညမ်းဆုံးနေရာနံပါတ် ၇ နေရာတွင်အတော်လေးကောင်းစွာနေရာယူထားသည်။ ၎င်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမဂုဏ်ယူနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။
လူ ဦး ရေ မီလူစု ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်းသည်လှပသောစိမ်းလန်းသောချိုင့်ဝှမ်းများတွင်လူတို့၏ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောယူရေနီယမ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့အပြင်အဆင်းရဲဆုံးသောနေထိုင်သူများသည်သူတို့၏တိရိစ္ဆာန်များသာမကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးသောညစ်ညမ်းသောမြစ်နှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နေရကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။
မေလူစုသည်ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည်ဗဟိုအာရှတစ်ခွင်လုံးတွင်မြေသြဇာအရှိဆုံးဒေသဖြစ်သောဖာဂူဆန်ချိုင့်ဝှမ်းနှင့်နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့်လူသိနည်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အနီးတစ်ဝိုက်၌စုစုပေါင်းဖြစ်ကြသည် ၂၃ ယူရေနီယမ်သတ္တုတွင်းများ ၎င်းသည်၎င်းတို့၏အိမ်နီးချင်းများကိုစီးပွားရေးအရအကျိုးပြုသော်လည်းမြစ်ကမ်းပါးတွင်နေထိုင်သောယူရေနီယမ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူလူများစွာအတွက်ပြconsiderableနာများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကြောင်းမလုံလောက်ခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်လည်းရှိပါတယ် အပိုင်းအစအမျိုးမျိုးသောလိပ်ခေါင်း ရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ်နှင့်အတူ။
လူအများအပြားသည်ဤရေများမှငါးများကိုစားသုံးကြသဖြင့်အလွန်ပြင်းထန်သောရောဂါများဖြစ်သည့်ရေဒီယိုကူကလိဒ်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ကင်ဆာ, သွေးအားနည်းရောဂါ o မွေးဖွားပုံပျက်သော.
နွေ ဦး ရာသီတွင်အခြေအနေပိုဆိုးလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ အကြောင်းပြချက်မှာအလုပ်နှင့်၎င်း၏ဘူမိဗေဒအခြေအနေကြောင့်မြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အရည်ပျော်သောနှင်းများနှင့်အတူယူရေနီယမ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိုမလူးဆူးမြစ်သို့တိုက်ရိုက်စီးဆင်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုတွင်ရှိသည့်လူ ဦး ရေသည် Mailuu Suu သာမကဥဇဘက်ကစ္စတန်နှင့်တာဂျစ်ကစ္စတန်များသာမကသူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်နိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ပြည်တွင်းပြitနာမဟုတ်တော့ဘဲနိုင်ငံတကာပြoneနာဖြစ်သည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခု။
အထူးသဖြင့်ကလေးများအတွက်နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာမြစ်ကမ်းပါးပေါ်တွင်ဖြစ်သည် U မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိယူရေနီယမ်စိမ့်ဝင်မှုအားမတွေ့ရပါ။ ဤဒေသတွင်ကလေးငယ်များသည်သူတို့ကျက်ကျက်သောနွားများနှင့်ဆက်လက်ကစားရန်နေရာဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုမတွေ့ရတာကအဖြစ်မှန်ကအရမ်းကွဲပြားနေတဲ့အခါ၊ ဘာမှပူစရာမလိုဘူး။
1 Mailuu Suu, အချိန်ဗုံး
2 ဘာကြောင့် Mailuu Suu သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အညစ်ညမ်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သနည်း
Mailuu Suu, အချိန်ဗုံး
ဤမြို့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပေါက်ကွဲနိုင်သည့်အချိန်ဗုံးတစ်လုံးဖြစ်လာပြီးဗဟိုအာရှတွင်အကြီးမားဆုံးမဟုတ်လျှင်ဂေဟစနစ်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ အဲဒီမှာသိုလှောင်ထားသည် သန်းကုဗမီတာရေဒီယိုသတ္တိကြွစွန့်ပစ် ကလေးများ၊ လူကြီးများသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်စေလူများကိုအန္တရာယ်ပြုသည်။
လူ ဦး ရေ ၁၆,၉၅၃ ဦး သောလူ ဦး ရေတွင်သူတို့ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသောအန္တရာယ်အများဆုံးမှာမြေပြိုခြင်းဖြစ်သည်။ နွေ ဦး ကာလအတွင်းသူတို့တစ်တွေအလွန်ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ပစ္စည်းပျက်စီးမှုအပြင်, သူတို့ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဒဏ်ရာနှင့်ပင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ် သေစေလောက်သောသားကောင်.
ထိန်းသိမ်းထားသောနံရံအချို့ရှိသော်လည်းယူရေနီယမ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားသည် သူတို့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြိုကျနိုင်သည်ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ပြောသည့်အတိုင်းမြေပြိုခြင်းများသည်များသောအားဖြင့် ၃၄ မီတာနက်သည်။
ဘာကြောင့် Mailuu Suu သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အညစ်ညမ်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သနည်း
၎င်းသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံအတွက်ယူရေနီယမ်ကိုစတင်တူးဖော်သည့်အချိန်မှစတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင်မိုင်းများကိုပိတ်ထားသည်။ အမှိုက်များကိုမြေအောက်မြေမြှုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်ခွာခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်နေရာတွင်လေထုထဲတွင်စုပုံထားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်ယူရေနီယမ်သည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်ကိုသိရှိခြင်း။ ထို့ကြောင့်ဒေသခံများသည်တစ်နေ့တွင်အကြီးအကျယ်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကြုံတွေ့ရမည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။
ယခင်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်မူကွန်မြူနစ်ခေတ်လွန်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးသည်အဖြေရှာရန်အတွက်ဘာမှမရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သဖြင့်ပြproblemနာဆက်ဖြစ်နေသည်။ Mailuu Suu ရှိအာဏာပိုင်များကပြသခဲ့သည့်လုံးလုံးလျားလျားစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ပေါ့ဆမှုကင်းမဲ့နေပုံရသောရလဒ် သင်သည်လူ့ခံနိုင်ရည်ထက်ကျော်လွန်သော radion အမှုန်များရှိသောလေကိုရှူရှိုက်မိသည်။ ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူး ငလျင်လှုပ်ခြင်းအန္တရာယ်မြင့်မားသည်၎င်းသည်ဘူမိဗေဒအရအဆင်ပြေသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။
စောင့်ဖို့သာကျန်တော့သည် ထိရောက်သောအစီအမံယူနေကြသည် လူများစွာထိခိုက်နိုင်သည့်အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုမဖြစ်နိူင်ပါ။
ထို့ကြောင့် Mailuu Suu သည်အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကောင်းသောမြို့တစ်မြို့မှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်မှထွက်ခွာရန်မသင့်တော်သည့်မြို့တစ်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သင်ပိုမိုနီးကပ်စွာရနိုင်သည် သင့်လျော်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအစီအမံကိုယူလျှင် သင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်အဲဒီမှာမရနိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » မီလူစုနှင့်ညစ်ညမ်းမှု
Rosario က de Yauca: အပျိုစင်Iqueña
Seville April Fair ကိုလေ့လာပါ